ဆနျခြိုနဲ့ ယူနိုကျတကျအသငျး။ – SoShwe
ယူနိုကျတကျအသငျးသညျ ဒေါ့မှနျအသငျးရဲ့ ညာတောငျပံကစားသမားလေး ဆနျခြိုကိုချေါယူနိုငျပွီဟု ယုံကွညျခကျြရှိနကွေောငျး သတငျးမြားက ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။ အသကျ (၂၀) အရှယျ အဆိုပါကစားသမားလေးအနဖွေငျ့ လာမယျ့နှရောသီအပွောငျးအရှေ့၌ ဂြာမနျမွကေို စှနျ့ခှာပွီး ဥရောပရဲ့ ထိပျသီးအသငျးတဈသငျးသငျးကို ရောကျရှိရနျ သတငျးမြားထှကျပျေါခဲ့ကာ လကျရှိအခြိနျ၌မူ ယူနိုကျတကျအသငျးက ဆနျခြိုအတှကျ လကျဦးမှုရယူနိုငျခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။
ကစားသမားနဲ့ ယူနိုကျတကျအသငျးအကွား ပုဂ်ဂိုလျရေးသဘောတူညီမှုမြားရရှိခဲ့ပွီဖွဈပွီး ကလပျနှဈသငျးကွား ပွောငျးရှကွေ့ေးညှိနှိုငျးရနျသာ ကနျြရှိတော့သညျဟုလညျး သတငျးမြားက ဖျောပွလကျြရှိပါတယျ။ ဆနျခြိုကိုချေါယူရနျ ယူနိုကျတကျအသငျးက ပွီးခဲ့သညျ့နှရောသီအပွောငျးအရှတေ့ညျးက စတငျစိတျဝငျစားခဲ့ပွီး ဆနျခြိုအတှကျ ရီးရဲယျမကျဒရဈ၊ လီဗာပူးနဲ့ ခြဲလျဆီးအသငျးတို့ကလညျး ယူနိုကျတကျအသငျးနဲ့အပွိုငျ စောငျ့ကွညျ့ခဲ့ကွပါသေးတယျ။
ဒါပမေယျ့ ယူနိုကျတကျအသငျး၌ အင်ျဂလနျလကျရှေးစငျအသငျးဖျောဖွဈသညျ့ ရပျရျှဖို့ဒျနဲ့ တှဲကစားရမညျ့ အခှငျ့အရေးရှိနခွေငျးကွောငျ့ ဆနျခြိုတဈယောကျ ယူနိုကျတကျအသငျးကို ဦးစားပေးရှေးခယျြခဲ့ဖှယျရှိပွီး အသငျးရဲ့ဂန်တဝငျကြောနံပါတျ (၇) ကိုဆကျခံသှားဖှယျရှိနပေါတယျ။ သတငျးမြားရဲ့ဖျောပွခကျြအရ ယူနိုကျတကျအသငျးနဲ့ဆနျခြိုတို့အကွား စာခြုပျသကျတမျးကာလ၊ လစာငှတေို့ကို ညှိနှိုငျးပွီးစီးခဲ့ပွီဖွဈပွီး ဒေါ့မှနျအသငျးကို ပွောငျးရှကွေ့ေး ပေါငျသနျး (၁၀၀) ဝနျးကငျြပေးခရြေဖှယျရှိပါတယျ။ ဒေါ့မှနျအသငျးကမူ လကျရှိအခြိနျအထိ သူတို့ရဲ့အဓိက ကစားသမားကို လကျလှတျလိုသညျ့ဆန်ဒမရှိဘဲ ဆနျခြိုကိုလစာတိုးပေးပွီး အသငျး၌ဆကျရှိနရေနျ ကွိုးပမျးနကွေောငျးလညျး သိရှိရပါတယျ။
ယူနိုက်တက်အသင်းသည် ဒေါ့မွန်အသင်းရဲ့ ညာတောင်ပံကစားသမားလေး ဆန်ချိုကိုခေါ်ယူနိုင်ပြီဟု ယုံကြည်ချက်ရှိနေကြောင်း သတင်းများက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အသက် (၂၀) အရွယ် အဆိုပါကစားသမားလေးအနေဖြင့် လာမယ့်နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့၌ ဂျာမန်မြေကို စွန့်ခွာပြီး ဥရောပရဲ့ ထိပ်သီးအသင်းတစ်သင်းသင်းကို ရောက်ရှိရန် သတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့ကာ လက်ရှိအချိန်၌မူ ယူနိုက်တက်အသင်းက ဆန်ချိုအတွက် လက်ဦးမှုရယူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ကစားသမားနဲ့ ယူနိုက်တက်အသင်းအကြား ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသဘောတူညီမှုများရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ကလပ်နှစ်သင်းကြား ပြောင်းရွှေ့ကြေးညှိနှိုင်းရန်သာ ကျန်ရှိတော့သည်ဟုလည်း သတင်းများက ဖော်ပြလျက်ရှိပါတယ်။ ဆန်ချိုကိုခေါ်ယူရန် ယူနိုက်တက်အသင်းက ပြီးခဲ့သည့်နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့တည်းက စတင်စိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီး ဆန်ချိုအတွက် ရီးရဲယ်မက်ဒရစ်၊ လီဗာပူးနဲ့ ချဲလ်ဆီးအသင်းတို့ကလည်း ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့အပြိုင် စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။
ဒါပေမယ့် ယူနိုက်တက်အသင်း၌ အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အသင်းဖော်ဖြစ်သည့် ရပ်ရ်ှဖို့ဒ်နဲ့ တွဲကစားရမည့် အခွင့်အရေးရှိနေခြင်းကြောင့် ဆန်ချိုတစ်ယောက် ယူနိုက်တက်အသင်းကို ဦးစားပေးရွေးချယ်ခဲ့ဖွယ်ရှိပြီး အသင်းရဲ့ဂန္တဝင်ကျောနံပါတ် (၇) ကိုဆက်ခံသွားဖွယ်ရှိနေပါတယ်။ သတင်းများရဲ့ဖော်ပြချက်အရ ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ဆန်ချိုတို့အကြား စာချုပ်သက်တမ်းကာလ၊ လစာငွေတို့ကို ညှိနှိုင်းပြီးစီးခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ဒေါ့မွန်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင်သန်း (၁၀၀) ဝန်းကျင်ပေးချေရဖွယ်ရှိပါတယ်။ ဒေါ့မွန်အသင်းကမူ လက်ရှိအချိန်အထိ သူတို့ရဲ့အဓိက ကစားသမားကို လက်လွှတ်လိုသည့်ဆန္ဒမရှိဘဲ ဆန်ချိုကိုလစာတိုးပေးပြီး အသင်း၌ဆက်ရှိနေရန် ကြိုးပမ်းနေကြောင်းလည်း သိရှိရပါတယ်။
Previous Coors Light ????????????? ?????????? ??????????????? ???? ?? ???? ??????????????
Next ယူနိုကျတကျသို့ပွောငျးရှရေ့နျ စိတျဝငျစားနသေညျ့ ဘာစီလိုနာကွယျပှငျ့ကစားသမား။